‘कोटेश्वर, गौशला, थापाथलीलगायतमा ‘ओभरहेड ब्रिज’ बनाउँछौं’ « रिपोर्टर्स नेपाल
‘कोटेश्वर, गौशला, थापाथलीलगायतमा ‘ओभरहेड ब्रिज’ बनाउँछौं’
प्रकाशित मिति : 2019 August 12, 6:57 pm
काठमाडौं, २७ साउन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले काठमाडौंको बाटो, घाटो, धुलोलगायतका अवस्थामा पनि पहिलेभन्दा अहिले सुधार आएको दाबी गरे । यद्धपी केही सडकहरुले भने आफूहरुलाई अहिलेपनि आलोचनाको पात्र बनाएको उनको स्पष्टोक्ति थियो ।
सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले थपे,‘कलंकी–नागढुंगा सडक, चावहिल–साँखु सडकका कारण हामी आलोचनाको शिकार भयौं । तर, अब हामी द्रुत गतिमा काम गरिरहेका छौं । खानेपानीको कारण सडक बनाउन अप्ठ्यारो भएको थियो । तर, हामीले अहिले खानेपानीको कामपनि आफैं गर्नेगरि बोलपत्र आह्वान गर्न लागेका छौं । यो आर्थिक मसान्तभित्रै सबै काम सम्पन्न गरिसक्छौं ।’
क्लबका सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले काठमाडौंलाई सुन्दर सहर बनाउनेगरि आफूहरुले काम गरिरहेको पनि विश्वास दिलाए । कोटेश्वर, गौशला, थापाथली लगायतमा ‘ओभरहेड ब्रिज’ बनाउन लागिएको पनि उनले सुनाए । त्यस्तै, उनले काठमाडौंमा स्मार्ट ट्राफिक लाईटहरु राख्ने पनि जनाए । यो वर्ष सरकारको पहिलो आधार वर्ष भएकोले जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकिएको उनले स्विकारे । तर, विकास निर्माणलगायत पूर्वाधार विकासमा सरकारले रेकर्ड नै कायम गरेको उनको दाबी छ ।
उनले भने,‘अहिले उहाँहरु करको दायरामा आउनुभएको छ । अब हामी यो क्षेत्रलाई सुधार गर्दै अघि बढाउँछौं ।’ उनले यात्रा, अपांग, ज्येष्ठ नागरिक, बालमैत्री बस सञ्चालन गर्न लागिएको सुनाए । त्यसको लागि तीन सय वटा विद्युतीय बस खरिद गर्न लागिएको र साझा यातायातलाई तीन सय करोड भुक्तानी दिईसकिएको पनि उनले जानकारी दिए ।
उनले सरकारले नाफामूलक रुपमा सब सञ्चालन नगर्ने स्पष्ट पारे । नेपालको अवस्था अहिले अत्यन्तै राम्रो भएको सुनाए । उनले भने,‘नेपालमा लगानी गर्न अहिले लाईन लागेको छ । हामी देश र जनतामा समृद्धि हाँसिल गर्नेगरि काम गरिरहेका छौं ।’
अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दावाद भन्दै विप्लवनिकट विद्यार्थी संगठन सडक आन्दोलनमा (फोटोफिचर)
काठमाडौं, २७ जेठ । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपानिकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियु क्रान्तिकारी सडक संघर्षमा
प्रधानमन्त्री देउवा र अमेरिकी सेनाका प्यासिफिक कमान्डरबीच भेटवार्ता
काठमाडौं, २७ जेठ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग अमेरिकी सेनाको एसिया प्रशान्त क्षेत्रका कमान्डिङ जनरल चार्ल्स
गृहमन्त्रीलाई सांसद घनश्याम खतिवडाको प्रश्न– कहिलेसम्म सत्तारुढ दलको ज्यादती खप्ने हो
काठमाडौं, २७ जेठ : प्रतिनिधि सभामा नेकपा (एमाले) का सांसद घनश्याम खतिवडाले मोरङको रतुमाई नगरपालिका–९ को
पूर्व सभासद् डा. महतोद्वारा मानवसेवा आश्रमलाई खाद्यान्न, फलफूल तथा शैक्षिक सामाग्री सहयोग
काठमाडौं, २७ जेठ । पूर्व सभासद तथा फूलकुमारी महतो मेमोरियल ट्रष्टका उपाध्यक्ष डा. वीरेन्द्र प्रसाद
शून्य समयः बाढी पहिरोबाट जोगाउन पूर्व तयार भएन
काठमाडौँ,२७ जेठ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा सांसदहरूले वर्षायाम सुरुभएसंगै देशका अधिकांश ठाउँमा बाढी
चीनमा युवायुवतीलाई चाँडो विवाह गर्न दबाब
एजेन्सी, २७ जेठ । कुनैबेला चीनमा चाँडो विवाह निरुत्साहित गरिन्थ्यो र एक भन्दा बढी बच्चा